LG Tone Free HBS-FN7: fanafoanana ny tabataba mahery vaika ary maro hafa | Vaovao momba ny gadget
LG Tone Free HBS-FN7: fanafoanana ny tabataba mahery vaika ary maro hafa
Miguel Hernandez | 28/04/2021 10:00 | General, hevitra
Miverina amin'ny enta-mavesatra isika miaraka amin'ny famakafakana vokatra mandeha, amin'ity indray mitoraka ity dia avy amin'ny orinasa Koreana Tatsimo LG izay vao tsy ela akory izay no nandefa ny «head of the range» mampiavaka azy manokana teny an-tsena, izay efa nosedraina hatry ny ela ary hiresaka aminao lava izahay.
Jereo miaraka aminay ny LG Tone Free HBS-FN7, headphone misy tranga misy otrikaretina, fanafoanana ny tabataba ary fampisehoana mahagaga. Holazainay aminao ny zavatra niainanay manerantany tamin'ireto headphone ireto izay nanome be dia be horesahina tato ho ato ary inona ny valiny taorian'ny nandalovanay ny latabatra fandinihanay.
Amin'ity indray mitoraka ity isika dia miresaka momba ny headphones izay eo an-tampon'ny piramidan'ny headset TWS miaraka amin'ny fanafoanana ny tabataba, na amin'ny fiasa na amin'ny vidiny. Izy ireo dia mitovy amin'ny fitaovana teo aloha avy amin'ny LG mihitsy izay mbola tsy nandalo ny latabatra fandinihanay, ny famaranana ao amin'ny FN6 ary misy vidiny mirakitra bebe kokoa noho io fanontana io satria 99 $ no misy azy ireo, miaraka amin'ny tsy fisian'ny fanafoanana ny tabataba mavitrika. Miresaka amin'izao fotoana izao isika LG Tone Free HBS-FN7 (manaraka io LG FN7).
3 Fahaleovan-tena sy kalitaon'ny feo
4 Fanafoanana ny tabataba miasa sy ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Ny marika dia nisafidy endrika «premium» sy famokarana. Ny fahatsapana ananantsika haingana amin'ny fifandraisantsika voalohany amin'ny fonosana sy ny vokatra amin'ny ankapobeny. Manana fananganana plastika mainty tanteraka ho an'ny singa efa nosedraina izahay ary rafi-pifandraisana an-tsofina amin'ny resaka mpandahateny an-telefaona, zavatra iray tena ilaina rehefa miresaka momba ny fitaovana misy ANC (Cancionation Noise Mavitrika noho ny fanafohezana azy amin'ny teny anglisy). Ny casing charge dia boribory feno amin'ny loko mitovy voalaza etsy ambony. Na izany aza, azontsika atao ny mividy azy ireo amin'ny fotsy raha maniry, ireo loko roa ireo dia ny palette misy.
lafiny de boaty: X X 54,5 54,5 27,6 MG
lafiny of the headphones: X X 16,2 32,7 26,8 MG
Ny tranga famandrihana dia misy LED mamantatra ny fiasan'ny headphone ary tsy misy firesahana ny marika ety ivelany, zavatra liana te hahafantatra. Vita amin'ny plastika matte izy io, tsy toy ny headphone akory, ary manohitra tsara ny dian-tanan-tànana. Mikatona izy io ary mifanaraka tsara amin'ny paosinao, miaraka amina USB-C eo ambadiky ny sarony ary bokotra fampifanarahana eo amin'ny ilany havia.
Amin'izany fomba izany dia manana antsipiriany mahavariana isika fa ny headphones dia mamoaka hazavana UV amin'ny headphones mba hanafoanana ny bakteria, ny rafitra LG's UVnano dia mampanantena fa hampihena ny bakteria amin'ny 99,9% miaraka amin'ny 10 minitra monja amin'ny rafitrao. Na izany aza, nanamarina izahay fa ity hazavana UV ity dia tsy atao mandritra ny 10 minitra fa miseho mandritra ny segondra vitsy.
Miatrika headphone isika izay manana pad silooro hypoallergenic sy fanoherana ny rano miaraka amin'ny fanamarinana IPX4, hahafahantsika mampiasa azy ireo isan'andro isan'andro amin'ny resaka fiofanana na orana maivana.
Amin'ny haavon'ny fifandraisana dia manana Bluetooth 5.0 isika, ary koa ny fahafahanao mifandray amin'ny Android sy ny iOS noho ny rindrambaiko LG Tone Free izay azo sintomina amin'ny alàlan'ny fitiliana ny kaody QR tafiditra ao anaty boaty. Ao amin'ny faritra teknika LG dia manome angon-drakitra teknika kely kokoa, noho izany dia tsy maintsy mifantoka amin'ny fahatsapana avelany antsika amin'ny fampiasany manokana amin'ny alàlan'ny fitsapana ataonay izahay. Manana microphone roa sosona izy ireo ary koa safidy hafa fanafoanana ny tabataba mahery vaika (ANC) ahafahantsika manitsy amin'ny alàlan'ny fifandraisana amin'ny headphones amin'ny alàlan'ny tontolony mikasika izay ahafahantsika mitendry mozika na mamaly antso.
Fahaleovan-tena sy kalitaon'ny feo
Fizarana iray manamarika ny fahafahan'ny fanatanterahana ankoatry ny famandrihana USB-C mahazatra, Qi mahazatra tsy misy tariby mametaka amin'ny alàlan'ny fametrahana azy eo am-pototry ny nentim-paharazana. Mikasika ny bateria dia manana 55 mAh isaky ny telefaona sy tranga 390 mAh izahay. Ny orinasa dia mampanantena antsika 7 ora ho an'ny headphone sy 14 hafa raha ampidirinay ny boaty famenoana. Nandritra ny fitsapana nataonay dia nahazo ny fizakan-tena 5h 30m izahay tamin'ny alàlan'ny fanafoanana ny tabataba. Mazava ho azy, tsara homarihina ny milaza fa USB-C afaka mahazo fiampangana mandritra ny adiny iray amin'ny fampiasana dimy minitra eo ho eo izahay.
Mikasika ny feo, LG dia misafidy indray ny Meridian Audio's Digital Signal Processing, na izany aza, ny fomba fampiasana efatra izay avelan'ny fampiharana anao hanamboaranay feo ho an'ny kalitao avo lenta. Tsara ny fanamarihanay bass fa tsy manarona ny feo izany. Tsy manana ny codec Qualcomm aptX izahay, saingy tsy nahatsikaritra fahasamihafana be loatra amin'ny headphone izay misy. Ny traikefanay dia nahafa-po ary nifanaraka tamin'ny vidiny naloanay ho an'ny vokatra, na dia mety tsy ho an'ny mpifaninana toa ny AirPods Pro aza (lafo kokoa).
Fanafoanana ny tabataba miasa sy ny hevitry ny tonian-dahatsoratra
Mampanantena antsika ny orinasa fa manana mikrô telo izahay hanafoanana ny tabataba na dia miresaka roa amin'izy ireo aza izy ireo. Amin'io lafiny io, ny headphones dia mamaly tsara ny fampisehoana takiana amin'ny fiantsoana an-tariby. SYNy feo tohanan'ny diaphragm misy sosona roa dia mahatonga ilay traikefa tena tsara raha jerena fa miresaka momba ny headset TWS an-tsofina isika. Ka amin'ny ankapobeny dia toa mahita vokatra boribory isika.
Azonao atao ny mahazo ny LG Tone Free FN7 amin'ny 178 amin'ny tranokalanao manokana na dia amin'ny vidin'ny fifaninanana lavitra kokoa noho ny 120 euro ao Amazon.
Ireo headphone ireo dia misongadina amin'ny loko mainty kokoa, miaraka amina endrika somary mahonon-tena sy kanto kokoa, izay mety ho ny loko izay atolotray. Manantena izahay fa tianao ny fandinihanay ny LG Tone Free FN7 avy amin'ny orinasa Koreana Tatsimo ary mazava ho azy mampatsiahy anao izahay fa afaka mamela anay hametraka fanontaniana momba izany ao amin'ny boaty hevitra ianao. Toy izany koa, mampahatsiahy anao izahay fa afaka misoratra anarana amin'ny fantsona YouTube misy anay izahay izay mamela amina atiny mahaliana be dia be izay azo antoka fa tsy ho tarainao.
Navoaka tamin'ny: 28 Aprily 2021
Fanovana farany: 27 Aprily 2021
Fitaovana sy famolavolana lafo vidy
ANC ary fahaleovan-tena tsara
Rafitra fihetsika tena notsorina
Vidiny azo ovaina
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » LG Tone Free HBS-FN7: fanafoanana ny tabataba mahery vaika ary maro hafa
Makà Star Wars PS4, DVD ary kilalao. Mandraisa anjara ary mahazoa WinX DVD Ripper maimaim-poana
Zavatra 5 tsy fantatrao momba ny fakantsary fiarovana anao